Mid ka mid ah Ismida Puntland oo baaq u diray Burcad badeed Dhawaan Markab Qabsaday – SBC
Mid ka mid ah Ismida Puntland oo baaq u diray Burcad badeed Dhawaan Markab Qabsaday
Garaad C/laahi Cali Ciid oo ka mid ah Isimada ugu magacaweyn Soomaaliya ayaa Baaq u diray Kooxo burcad badeed Soomaali ah oo dhawaan gacanta ku dhigay Makrab Ganacsi oo laga leeyahay Wadanka Soomaaliya kaasi oo shidaal u siday Ganacsato Soomaaliyeed.
Garaad oo wareysi siiyay Warbaahinta SBC ayaa sheegay in dhawaan ay kulan ku qabteen Ismo uu isagu ku jiro Magaalada Boosaaso Kaasi oo looga hadlayay Sidii Kooxo burcad badeeda Soomaali ah oo haysta Markabka MV Jubba XX oo ay leeyihin Ganacsto ka soo jeeda Deegaanada Somaliland loogu qancin lahaa inay siidaayaan
Garaadka ayaa ugu baaqay Kooxaha Markabkaasi haysta in ay sid shuruud la’aan ah ku siidayaan markabka & Shaqaalaha Saaran iyadoo la ilaalinayo Xuquuqda Biniaadamanka.
Garaadka ayaa Sidee kale baaq u diray Kooxo Burcad badeed ah oo Horaantii sannadkan afduubtay Qoys Denmark u dhashay kuwaasi oo lagu haysto Deegaano Dhaca Xeebaha Gobolka Bari ee Puntland waxana uu ugu baaqay in ay muhiim tahay in Dadkaasina Xoriyadooda la siiyo isaga oo xusay in qoyskaasi ay ku jiraan caruur ay da’a yar.
Garaad ayaa waxaa uu xusay in Isamo kale oo ka soo jeeda Deegaanada Somaliland inay Joogaan Magaalada Garoowe kuwaasi oo u yimid sidii wax looga qaban lahaa xaalada Markabkan Gacanta u galay Kooxaha Burcad badeeda ah.
Markabka MV Jubba XX ayaa waxaa ay kooxaha Burcad badeeda Todobaadkii Hore ka qabsadeen Meel aan ka baxsaneyn Xeebaha soomaaliya markabka Shidaal u siday Dekada Magaalada Berbera isaga oo aan weli la ogeyn halka ay la aadeen.
Baaqan ka soo baxay Ismida ayaa ku soo aadaya Xilli Burcad badeeda Soomaalida ay u muuqdaan kuwo dhagaha ka fureysanaya hadalada Bulshada,maamulka & Beesha Caalamka islamarkaasina ay si xowli ah u sii wadaan Afduubashada gadiid badeedka Maraya Biyaha Caalamka.
Mudooyinkii ugu danbeeyay waxaa xeebaha Soomaaliya si xowli ah uga socda Afduubashada Gadiid badeedka maraya xeebaha u dhow Soomaaliya waxaana Gadiidka ay qafaashaan Burcad ay geeyaan Deegaanada Xeebaha leh halkaasi oo ay ku sugaan Lacagaha ay dalbadaan
Inkasta oo ay Baaq ka soo saareen Isimada & Qeybaha Bulshada Afduubashada Gadiidka Badda hadana ma jiro hadal rasmi ah oo ka soo baxay Kooxaha Burcad badeeda oo ku aadan inay joojinayaan howlagalada Burcadnimada ah ee ay ku jiraan.